Wasaarada arrimaha debeda Kenya oo shaacisay dhalooyinka qaar dadkii weeraray gurriga Westgate – Radio Daljir
Wasaarada arrimaha debeda Kenya oo shaacisay dhalooyinka qaar dadkii weeraray gurriga Westgate
Seteembar 24, 2013 5:20 b 0
Nairobi, September 24, 2013 – Wasaarada arrimaha debeda ee Kenya ayaa sheegtay in dadkii weeraray dhismaha ganacsiga ee Westgate ay haysteen dhalashooyin kala duwan, isla markaasna saddex ka mid ah ay ka yimaadeen gobolka Minnesota ee USA.
Wasiirka arrimaha debeda ee Kenya Aamina Maxamed Jibriil oo howl-galka ka hadashay ayaa sheegtay in ay heleen dhalooyinka saddex qof oo isugu jira Soomaali iyo carab haysta dhalashada USA, sidoo kale waxay xaqiijisay in ay howl-galka ku jirtay gabar u dhalatay Britian.
?waa da?yar 18 ilaa 19 jir waxay jinsiyada asal ahaan yihiin Soomaali iyo carab, balse waxay haystaan dhalasha Maraykanka oo dhamaantood saddexda qof waxay ka yimaadeen gobolka Minnesota? ayey tiri Marwo Aamina oo saxaafada kula hadashay Nairobi.
Docda kale waxay sheegtay in dadka weerarka qaaday ay ku jirtay haweenay u dhalatay Britian oo dhowr jeer falal Argagixiso ka fulisay caalamka, arrintaas ayaa meesha ka saaray hadal horay uga soo yeeray wasiirka arrimaha gudaha Kenya kaas uu ku sheegay in ay dhamaantood rag yihiin dadka qabsaday westgate.
Kenya waxay ka dalbatay caalamka gaar ahaan dalalka ay ka yimaadeen dadka weerarka ku qaaday Westgate in ay talaabo qaadan, isla markaasna la helo iskaashi caalami ah oo ka dhan ah Argagixisada Barriga Afrika iyo kuwa dunnida
NATO oo Soomaaliya ka caawin doonta tababarrada iyo in la dhiso awoodda ciidamada dowladda